Dị Mkpa karịa iPhone? | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 13, 2007 Thursday, June 11, 2015 Douglas Karr
Ihe ngosi 3d nke ekwentị mkpanaaka nwere ihuenyo ngbanwe dịpụrụ adịpụ na ọcha
Teknụzụ ka na-eto n'ike n'ike, oge ụfọdụ na-eyi egwu. O siri ike ịmata otu nke a ga-esi gbanwee ndụ anyị n’ọdịnihu. Lelee anya video a na mgbanwe OLED ngosipụta:
Cheedị na ị na-ekiri telivishọn na aka gị, ma ọ bụ ikekwe ị na-ahụ mgbasa ozi na ịzụ ahịa ịzụ ahịa… ma ọ bụ ọbụna vidiyo na ngwaahịa ahụ n'onwe ya. Kedụ maka vidiyo vidiyo na ngosipụta a na-abịa na ngwaọrụ ọzọ ịzụrụ (ọ bụrụ na ịnweghị ngosipụta n'ime ya ugbua!). Uche-boggling!
N’oge na-adịghị anya, azụrụ m kaadi microSD 2Gb maka Razr ma ọ dị nha dime. Ichere na m nwere ike ịchekwa vidiyo ogologo oge na mgbawa a, ma gosipụta ya na ihuenyo nwere ike dabara na ugogbe anya maka anwụ m… Chaị!
Okpu okpu na- Ọdịnihu Teknụzụ Anyị ebe m chọtara vidiyo ahụ.
Tags: Mgbanwe oledSony
Sep 14, 2007 na 2: 27 AM
Yep, anyị sụrụ ụzọ na teknụzụ a na UK (ọbụghị m n'onwe m). Enwere okwu banyere ime akwụkwọ ahụaja site na ihe a ka ị nwee ike ịgbanwe gị ụcha ụlọ ma ọ bụ ụkpụrụ ka esi chọọ. Ma obu n'ezie lee agba agba (vidiyo nke ihicha agba n'eziokwu).
Sep 14, 2007 na 10: 17 AM
Chaị. Nke ahụ dị ịtụnanya! A bụ m ezigbo ọkpọ maka Ngwa na ihe ahụ n'ezie jidere mmasị m. Chegodi inwe ike ịpịkọta TV gị ma tinye ya n'akpa azụ gị? Olee otú oyi ga-adị? 😉
Sep 14, 2007 na 2:02 PM
M niile maka convergance, enwetaghị m ihe na-ezighi ezi mana… Anyị chọrọ ezigbo ala maka ihe ndị a. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ọ bụla pere mpe karịa Iphone, na vids ga-abụ ihe na-abaghị uru.